Kusetshenziswa Ukuhlolwa Okuzenzakalelayo Ukuthuthukisa Isipiliyoni Sokuthengisa | Martech Zone
Kusetshenziswa Ukuhlolwa Okuzenzakalelayo Ukuthuthukisa Isipiliyoni Sokuthengisa
NgoLwesibili, Agasti 4, 2020 NgoLwesibili, Agasti 4, 2020 UMahendra Alladi
Ukuhlala ngaphambi kwezinguquko ezisheshayo nokuphindaphindwa kwepulatifomu yamabhizinisi amakhulu, njengeSalesforce, kungaba yinselele. Kepha iSalesforce kanye I-AccelQ basebenza ndawonye ukuhlangabezana naleyo nselele.
Kusetshenziswa ipulatifomu yokuphathwa kwekhwalithi ye-AccelQ, ehlanganiswe ngokuqinile ne-Salesforce, isheshisa kakhulu futhi ithuthukise ikhwalithi yokukhishwa kweSalesforce yenhlangano. I-AccelQ yinkampani yesikhulumi esisebenzisanayo engayisebenzisa ukwenza i-automate, ukuphatha, ukwenza, nokulandela umkhondo wokuhlolwa kwe-Salesforce.
I-AccelQ ukuphela kwendlela yokuhlola ezenzakalelayo neplatifomu yokuphatha efakwe ohlwini lwe- I-Salesforce AppExchange. Eqinisweni, amakhasimende amaningi ebhizinisi lakwaSalesforce afakazele i-AccelQ, enikezwe inani elethwe ukukhulisa imijikelezo yabo yokukhishwa kwe-Salesforce. I-AccelQ idlule kwinqubo yokuhlola enzima ukuthola uhlu ku-Salesforce AppExchange. Eqinisweni, amakhasimende amaningi ebhizinisi lakwaSalesforce afakazele i-AccelQ, enikezwe inani elethwe ukukhulisa imijikelezo yabo yokukhishwa kwe-Salesforce.
Ipulatifomu Ephelele Yokulawulwa Kokuhlolwa
I-AccelQ iyipulatifomu ephelele yokuphathwa kokuhlolwa okusiza amabhizinisi ukuletha ukuqaliswa kwekhwalithi ye-Salesforce. Iphethwe efwini, i-AccelQ ishesha kakhulu futhi kulula ukusetha kune-Provar noma iSelenium.
Amathuluzi amanje azama ukwenza ukuhlolwa kwe-Salesforce akuphumeleli ngoba awakwazi ukuletha umbono webhizinisi. Futhi behluleka ukuphatha isikhombimsebenzisi somsebenzisi se-Salesforce nezinto zayo. I-AccelQ yenza lula, isebenzise, ​​futhi isheshise i-Salesforce test automation ne-Salesforce Universe yayo eyakhelwe ngaphambili, isixazululo esikhethekile se-AccelQ sokusekela uhlelo lwemikhiqizo ye-Salesforce.
I-Salesforce ingakhohlisa ngokuqukethwe kwayo kwewebhu okunamandla, ama-iframes, ne-Visualforce, ukusho okumbalwa, okuhambisana nesidingo sokusekela i-Salesforce's Lightning and Classic editions. I-AccelQ iphatha ngokukhululekile konke lokhu okuyinkimbinkimbi nge-automation elula engenamakhodi etholakala efwini. Ukuqaliswa kokusebenza nokukhululwa kuye kwashesha kakhulu kuwo wonke amakhasimende e-AccelQ's Salesforce ngenkathi iletha ikhwalithi ephezulu ebhizinisini ngezindleko eziphansi kakhulu.
Amasudi wokuhlola e-AccelQ's Salesforce aphatha ukuhlela okususelwa kumojuli noma okususelwa ekushintsheni, ukwenziwa, nokulandelelwa ngezinhlelo ezilungiselelwe ngaphambilini. Ivumela izinkampani ukuthi zilandelele amacala wokuhlola enziwe ngokubuka kwenqubo yebhizinisi futhi inike amandla imijikelezo yokuqinisekisa esheshayo enezinguquko eziqhubekayo zokumiswa ekusebenzeni kwazo kwe-Salesforce.
I-Salesforce Content Pack isheshisa i-Salesforce test automation ene-Salesforce Universe echazwe ngaphambilini, ukuzenzakalela kolimi lwemvelo okungenamakhodi, kanye namakhono wokuhlaziya umthelela wokushintsha okuzenzakalelayo. Izinkampani zingafinyelela ukusheshisa okungaphezu kuka-3x esigabeni sokuqinisekisa ikhwalithi yokusetshenziswa kweSalesforce.
Ukuhlolwa okuzenzakalelayo nokuphathwa
I-AccelQ inikeza ukuhlolwa okuzenzakalelayo okushesha njengombani futhi okulula, njengeSalesforce. Inikeza:
Imodeli ebonakalayo yokusetshenziswa kwenkampani kweSalesforce nezinqubo zebhizinisi
Ayikho i-code automation elula futhi enamandla
Ukuhlela kokuhlola okuhlakaniphile nokusetshenziswa kwamafu kunikwe amandla ngokuhlanganiswa okuqhubekayo
Ukuphathwa okuphelele kokuhlolwa kokulandeleka okwakhelwe ngaphakathi kwazo zonke izimpahla zokuhlola
Ideshibhodi ye-Agile yokulandela ngomkhondo nokubika okuningiliziwe
Futhi, i-AccelQ igcwalisa i-Selenium yezinkampani ezifuna ukwenza ukuhlolwa kwazo kokusebenza kweSalesforce ne-Selenium, ikakhulukazi lapho ukuhlolwa ngesandla kukodwa kungakwazi ukumboza izidingo zokuhlolwa kokuhlolwa kabusha.
Izicelo ezakhelwe ku-Salesforce zinzima kakhulu futhi zingaba yinselele ukuzihlola ngeSelenium. I-AccelQ ivumela abahloli ukuthi bakhiqize amacala okuhlola we-Salesforce kalula futhi ithuthukise amandla kaSelenium, ayenze ithembeke, isabeke, futhi ibize kakhulu.
Isifundo Samacala Ohlolo lwe-AccelQ Salesforce
Ikhasimende elilodwa leSalesforce inike amandla abasebenzisi bayo bebhizinisi leSalesforce ngamakhono wokuhlola okuzenzakalelayo, we-in-sprint avela kwa-AccelQ
Ikhasimende, ulwazi lomhlaba wonke, idatha, nenkampani yokulinganisa ezinze e-UK, belifuna ukuthuthukisa ulwazi lomsebenzisi kanye nekhwalithi nokushesha kohlelo lokuphathwa kobudlelwano bamakhasimende akwaSalesforce. Lokhu kuqaliswa kwe-Salesforce kwakubaluleke kakhulu ebhizinisini, kepha ezimweni ezijwayelekile, ukuhlolwa kokuhlehliswa kabusha ngabe kudle inani elikhulu lezinsizakusebenza.
Ngakho-ke ikhasimende lifuna uku:
Shintsha ukuqinisekiswa kwenqubo yebhizinisi kumamojula we-Salesforce ahlukene ayisithupha
Phatha ubunzima bezilawuli zeSalesforce Lightning zokusebenzisana okuzenzakalelayo
Nciphisa ukuhlolwa okwenziwa ngezandla kusuka ezinsukwini eziningi kuye emahoreni ambalwa
Bhekana ngempumelelo nezinhlaka ezakhiwe ngamandla nezakhiwe esidlekeni ku-Salesforce futhi uvikele ukulungiswa ngaphezulu
Nika amandla ithimba lebhizinisi ukuthi lenze i-in-sprint automation
Izinzuzo zebhizinisi ze-AccelQ, zifakiwe:
Ngokushesha, ukukhishwa kwekhwalithi ephezulu ye-Salesforce
Imizamo yokuhlola yezandla yezinsuku eziningi yehliselwe emahoreni ambalwa okubuyela emuva okuzenzakalelayo
Ukwehliswa okuphawulekayo kwezindleko nomzamo
Modularity enika amandla ukuthuthukiswa kwenqubo ezenzakalelayo yenqubo yebhizinisi esetshenziswe ngaphezulu kwamaphesenti angama-80
Amathimba wokuhlola anikwe amandla ukuklama nokuthuthukisa i-automation ngasikhathi sinye ngokuqaliswa kwesici esisha
Ukusebenza kahle kwezobuchwepheshe okunenzuzo esimeme
Imikhuba emihle eshumekiwe kanye nemigomo yokuklama ukuze kubhekwane ngokungaguquguquki nokukhathazeka kokulandeleka
Ukuhlolwa kwe-Salesforce kanye ne-automation kudinga ubukhali obungeziwe ngenxa yemijikelezo yokucindezelwa nokuqalisa kokusebenza. Amandla we-AccelQ akhululwe ngokukhethekile ngamafa wokuzenzakalela wokulungela ukusebenzisa ngaphandle kobunzima nobuchwepheshe. Nge-AccelQ, amabhizinisi anganika amandla abasebenzisi bawo bebhizinisi nabanye ababambiqhaza futhi athole ukubonakala okuphelele kuzinga lokusetshenziswa kwawo kwe-Salesforce.
Isivivinyo Samahhala se-AccelQ seSalesforce
Tags: ukuguqulainqubo yokusebenza kwebhizinisi ezenzakalelayoukuhlolwa okuzenzakalelayo kokuhlehliswainqubo yebhizinisi ezishintshayosalesforceukuguqulwa kokuthengiselanaiphakethe lokuqukethwe labasebenziumbani wabasebenziukuhlolwa kwabasebenziseleniumukuhlolwa okuzenzakalelayoukuphathwa kokuhlolwaukuhlola okuzenzakalelayoyezimpa
UMahendra unguMsunguli kanye ne-CEO ye-accelQ, ipulatifomu yokuhlola eqhubekayo yamafu eyenza ngokuzenzakalela i-API nokuhlolwa kwewebhu ngaphandle kokubhala umugqa owodwa wekhodi.
Izibalo Zokwabelana Ngemakethe ye-PayPal Nomlando Wayo Wokubusa Ukucubungula Izinkokhelo Ku-inthanethi
Isivinini Sesayithi Sithinta Kanjani Amanani Wokuguqulwa Kwe-ecommerce